नेपाल प्रहरीको २८ औ IGP को हुने ? क्षेत्री र पाल | AbcSanchar.com
नेपाल प्रहरीको २८ औ IGP को हुने ? क्षेत्री र पाल
प्रकशित मिति : ११ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०६:४६
(एबिसी क्राईम ब्युरो) काठमाडौं नेपाल प्रहरीमा २८ औं महानिरीक्षकको लागि दौडधुप सुरु भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीले २५ असारबाट अवकाश पाउने भएकाले डेढ महिनाअघिबाट आकांक्षीहरुको शक्तिकेन्द्रहरुसँग भेटघाटका श्रृंखला बढेको छ ।
त्यसो त गत चैतमा नै एआईजी हुने र असारमा आईजिपी हुने उनको दाउ थियो । शैलेश थापाको ब्याच उनीविरुद्ध एकजुट भएपछि उनी असफल भएका थिए । यसपटक भने उनकै ब्याच उनलाई बढुवा हुनबाट रोक्ने रणनीतिमा लागेको स्रोत बताउँछ । यसपटक उनलाई एआईजी हुन रोकेमा ब्याचका अन्य अधिकृतहरु समेत पछि आईजिपीको प्रतिस्पर्धामा हुनेछन् । जसमा सहकुल थापा, धिरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी, बसन्त लामा लगायत छन् । यही कारण उनीहरु पोखरेलविरुद्ध एकजुट हुने सम्भावना छ सभार दृष्टि न्युजबाट